Soomaaliya oo QM kala hadashay dardar gelinta howlaha gurmadka | Banaadir Times
HomeUncategorisedSoomaaliya oo QM kala hadashay dardar gelinta howlaha gurmadka
Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Qaraanka Mudane Amb: Jamaal Maxamed Xasan oo maanta xarunta dhexe ee wasaaradda kulan kula qaatay xubano ka socday xafiiska QM-ka ee Soomaaliya oo uu hoggaaminayay ku-xigeenka wakiilka QM-Soomaaliya Mr: Adam Abdelmoula, ayaa looga hadlay dar-dar galinta shaqooyinka arrimaha bani’aadinimada, horumarinta dhinacyada arrrimaha bulshada iyo deggaanka.
Kulanka waxaa uu ahmiyad gaar ah siinayaa howlgalinta qaab-dhismeedka xafiiska Qaramada Midoobe ee Soomaaliya, kaas oo dar-dar galinaya howlaha baaxadda leh ee ku cad Qorshaha Hourmarinta Qaranka iyo Istaraatijayada UN-Soomaaliya 2021-2025.
Sidoo kale waxaa la is la gartay in la xoojiyo arrimaha bani’aadinimo ee haatan taagan, sida in xarunta ka jawaab celinta dhibaatooyinka in ay si buuxda u shaqeyso, iyo xoojinta adeegyada nidaamka dalka.
Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maal-gashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Amb: Jamaal Maxamed Xasan ayaa tilmaamay in ay qeyb ka noqoto xafiiska UN-ka ee Soomaaliya isku-duwida ay hoggaanka u tahay dowladda (Government led-Coordination).
Waxaa Wasiirka ku wehliyay shirka qaar ka mid ah madaxda Wasaaradda Qorsheynta iyada oo kullanka la isku raacay in la xoojiyo horumairnta arrimaha kor lagu xusay.
Previous articleQarax ka dhacay degmada Diinsoor & khasaaro ka dhahay
Next articleBooliska Soomaaliya oo sheegay in la qabtay nin kufsi & dil geystay